Mashiinka Inline Atc Cnc Machine, Woodworking Atc Cnc Machine, Cnc Cut Cut Machine- JCUT
Qalabka router ATC alwaax cnc router router
Mashiinka rakaabka cnc alwaaxa
Ku saabsan JCUT
Waxay ku yaalliin Jinan, Gobolka Shandong, Jinan JCUT CNC Qalabka Co., Ltd. (JCUT-CNC) waa shirkad heer sare ah oo CNC ah oo ku takhasustay (qaabaysan) gudi ...
Wax soo saarkayagu waxaa ka mid ah rar si toos ah loosoosaaray iyo soo dejinta mashiinka goynta CNC, mashiin afar geedi socodka cnc goyn, mashiinka hoosta ATC cnc ...
Tayada sare, Tiknolojiyad cusub, curinta cusub, iyo adeegga iibka ka dib. Waxay adduunka siisaa qalab tayo sare leh oo tayo sare leh.
1325 afar xuub oo leh toosan ATC
Sharraxaadda Mashiinka 1. Goynta, guntinta, feedhka, gogosha (sawir fudud). Afarta geeddi-socod ayaa loo adeegsan karaa goynta goleyaasha iyo albaabo gogol-dhaafka labadaba. Adeegsiga barnaamijka isbedelka aaladda tooska ah ee barnaamijka, barnaamijka wuxuu si otomaatig ah u fuliyaa shuruudaha ka baaraandegista iyada oo aan wax faragelin ah lagu samayn. Dabaylo farabadan ayaa isku mar wada shaqeeya, si wax ku ool ah u hagaajinaya waxqabadka. 2. Waxaa lagu qalabeeyay miis adsorption vacuum ah, mashiinka vacuum-ku wuxuu si buuxda u buuxin karaa alaabada adsorb ee cabbiro kaladuwan, iyo ...
ATC alwaax cnc 1325
Sharraxaadda Mashiinka 1. Laba iyo toban qalab ayaa loogu keydiyaa joornaalada tooska ah ee joornaalada ah ee wax lagu beddelo, iyo laba iyo toban qalab ayaa si madaxbanaan loogu beddeli karaa si ay ula kulmaan howlo badan oo howsha ka awood badan. 2. Falanqaynta ugu dambeysa, faa iidooyinka furitaanka lamino waxaa keenaya lamino isku xirnaanta aan la arki karin ee lagu socodsiin karo. Faa'iidooyinka lamino aan la arki karin ayaa ka dhigaya furitaanka lamino mid caan ah. Marka la barbar dhigo qaabab kale oo iskuxiran oo aan muuqan, qaabka golaha ...
Dhaqaalaha afar geedi socodka mashiinka goynta dhirta R4
Sharraxaadda Mashiinka 1. Mashiinka afar-geynta ah iyo mashiinka furitaanka waxaa loogu talagalay macaamiisha si kor loogu qaado waxtarka. Afarta madax waxaa xukuma muruqyada oo si aan kala sooc lahayn loo beddeli karaa, kuwaas oo si fudud u dhammaystiri kara barnaamijyada badan ee uu dajiyay macmiilku (hawluhu waxay u baahan yihiin is beddello qalab gudaha 2-4 aaladaha), Taas oo badbaadinaysa isbedelka gacanta ee mindiyaha dhexda dhexe oo ah. ku habboon badeecadaha howsha badan leh ee wax soo saarka albaabo, alwaax iyo mus ...
Naqshadaynta cusub afarta xawaaraha ee loo yaqaan 'ATC' router cnc router
Sharraxaadda Mashiinka 1. Qiimuhu aad ayuu u yaryahay: wuxuu ku habboon yahay warshadaha guryaha ee alaabta guryaha lagu isticmaalo iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Xitaa qalabka sare ee 12-30 kun oo geedi socodka ah ee CNC mishiinka marinta miiraha ayaa qiimahoodu yaryahay marka la barbar dhigo moodalka leh boorsada qodista. Waa xulasho wanaagsan warshadaha guryaha oo leh culeys dhaqaale oo aad u badan. 2. Labada gole ee golaha labada-adeegsi: Marka laga eego aragtida qaab dhismeedka, afarta habraac waxay ka tirsan yihiin qaabka fudud ee badalka aaladda, oo adeegsanaya afar geesood si loo xaqiijiyo ...
Fadlan noo dhaaf oo waxaan kula xiriiri doonnaa 24 saac.
Sharraxaadda Mashiinka 1. Tayaynta sare: matoorro badan oo firfircoon ayaa shaqeynaya isku waqti, waxay ku dhammeyn karaan howsha alaabooyinka tiro aad u badan. Barnaamijka is-beddelka qalab otomaatiga ah ee horukaca, ma jiro wax-ka-qabasho gacan-qabsi ah, barnaamijka si otomaatig ah ayaa loo fuliyaa. Adeegsiga miisaska adsorption-ka caalamiga ah ee tikniyoolajiyada caalamiga ah, oo ku qalabeysan bambo hawo leh awood ballaadhan oo adsorption ah, naqshadeyn afar-qaybood ah, adsorption xoog leh oo ka kooban aagag kaladuwan, ayaa si weyn u hagaajineysa hufnaanta shaqada. 2. Deg deg t ...
Mashiinka lacagaha ee Atc
Sharraxaadda Mashiinka 1. Mashiinkan wuxuu adeegsadaa GDZ ama nooca 'HQD astaanta Hawada. 9wareeg awood koronto sareysa, hufnaan heer sare ah. Adeegsiga barnaamijka is-beddelka qalab otomaatiga ah, is-beddel deg-deg ah oo qalab ah. 2. Waxaa lagu qalabeeyay servo matoor, qalabka saxda ah ee sareeya iyo gaari xamuul oo la soo dejiyay, kaasoo mashiinka ka dhigaya mid hagaagsan, oo leh dhawaq aad u hooseeya, xawaare aad u sarreeya iyo saxsanaan sareysa. 3. Sariirta alwaax culus culus-sariirta dusheeda (saxanka qodista shan-gees leh oo cabbirkiisu yahay 0.02mm). 4. Geedi socodka mashiinka ee gogosha beelka ...
Sharraxaadda Mashiinka 1. Degganaanshaha qaab-dhismeedka: dhismaha oo dhan ee bir-dhiska ayaa isku xidhan, oo lagu daweeyo gariir (duuf) duqow, oo aan wax isbeddel ah dhicin muddada dheer isticmaalkeeda. 2. Nidaamka 'Taiwan Syntec' ee nidaamka xakamaynta waxsoosaarka heer sare ah, oo leh tayo xasilloon oo heer sare ah, dayactir wanaagsan, ayaa xakamayn kara dhammaystirka 3D-lakabka badan, dhaqso badan, farsamaynta 3D, carreynta iyo goynta. 3. Gawaarida ka soo dejisay Talyaani HSD awooda sare ee hawo qaboojinta hawada ah, fidsan sare, ...
Sharraxaadda Mashiinka 1. Foosha, qodista, goynta, geeska hogaaminta, dhirbaaxada, iwm., Afar wareejinta madaxa wareegga ee ka hooseysa mindiyaha, habka mindida loo beddelo iyada oo aan la carqaladeyn, si loo gaaro mashiin. 2. Kontroolka muujinta muuqaalka muujinta bini-aadamka, hawlgalka nacasnimada, hawl wadeennada ayaa shaqada ku jiri kara ka dib tabobar fudud, uma baahna shaqaale farsamo. Mashiinka ayaa dhaqaaqi kara si xoog leh, hufnaanta ayaa sarreysa, waxay kaa caawineysaa inaad ku guuleysato wax soo saarka. Mashiinku wuxuu xayeysiinayaa HQD awood sare oo hawo qaboojin ah, adeeg buuxa ...
Faa'iidooyinka mashiinka goynta CNC
Mashiinka goynta CNC, oo sidoo kale loo yaqaan qalabka wax soo saarka saqafka alaabada saxan ee caqliga leh. Sida magacu tilmaamayo, dhammaan howlaha ka socda rarida, goynta, qoditaanka godka toosan iyo faaruqinta saxanka ayaa lagu dhammeeyaa hal go '. Waxay si buuxda u bedeshaa wax soo saarka gacanta iyo ka shaqeynta. Marka, waa maxay ...
JCUT CNC mashiinka dayactirka mashiinka mashiinka
Dhibaatada dhaqameedku waa: 1. Mashiinka mashiinka ee waligii aan la dayactirin: jiheeyaha isgoyska tareenka si xun ayaa loo hagaajiyaa, xawaaraha mashiinka ayaa gaabis ah, saameynta shaqada ma fiicna, nolosha mashiinka ayaa liita, garabka 'Z' wuu taaganyahay, garaaca guud qaladku waa balaaran yahay, xagasha la xushayna ma fiicna! Dr ...
Mashiinada gawaarida taxanaha ah ee loo yaqaan 'CN9 CNC' Mashiinada wadista gawaarida R9 taxanaha CNC: Mashiinka quseeya mashiinka: googobka goynta feerka waxaa loo adeegsan karaa habeynta guddiga nooca alaabta dhaqaajinta moodada qaabeynta qolka kabadhada albaabka xirmooyinka jilicsan ee dhabta ah alwaaxa gudaha alwaax adag kombiyuutarka alaabta guriga. Taxanaha R7 CNC ...
Wadahadal Bilaash ah +8618006360664
Wadahadal Bilaash ah +8615863173380